စတေး ဟုမ်း အချစ် – Hlataw.com
ဒီလို ဖြစ်လာ လိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး ။ မထင်တာတွေက ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အမေရိကန်ပြည် အရှေ့ဖျားက မြို့ကြီးတမြို့မှာ မြန်မာလူမျိုး တက်နေဝန်း နဲ့ ဇနီး ဇွန်ပန်းခိုင်တို့ နေနေကြတာ ဆယ်နှစ် မက ရှိနေပါပြီ ။ တက်နေဝန်းက အိုင်တီသမား တယောက် ဖြစ်သလို ဇွန်ပန်းခိုင်က ရုံးတရုံးမှာ စာရင်းကိုင် ( အကောင့်တင့် ) ဖြစ်သည် ။ အလုပ် နဲ့ အိမ် အိမ်နဲ့ အလုပ် အေးဆေးတဲ့ ဘဝ ခရီးလမ်းကြောင်း ထဲမှာ သူတို့ လင်မယား မျောပါနေခဲ့ကြရာက အပြောင်းအလဲတွေက ဖြစ် လာသည် ။ ပထမဆုံး တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ လင်းနို့ တို့ ကြွက်တို့ ခွေးတို့ ရောင်းချနေတဲ့ ဈေးတန်းလေးကို သတင်းတွေမှာ တွေ့ရပြီး သာမန်လူတွေ မစားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဟာတွေကို စားကြလို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ် ပိုး စတင် ကူးစက်လာသည် လို့ ရေးကြသားကြတာကို ဖတ်ကြရတယ် ။ တက်နေဝန်းတို့ အတွက်က မြန်မာပြည်က လာခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေမို့ သိပ်တော့ မဆန်းလှဘူး ။ သူတို့လည်း ပရစ်ကြော်တို့ မြွေသား ဖွတ်သား ယုန်သား လယ်ကြွက်ကြော်တွေ စားခဲ့ဘူးကြတယ်လေ ။ ခဏကြာတော့ ဝူဟန်မြို့မှာ ဇီဝ လက်နက် စမ်းသပ်တဲ့ နေရာကြီး ရှိပြီး အဲဒီကနေ ရောဂါပိုးတွေ ပေါက်ထွက် ပျံ့နှံ့လာတယ် လို့ ထပ် ကြားရပြန်တယ် ။
ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်မို့ ဒီသတင်းတွေကို ဖတ်တော့ ဖတ်မိတယ် ။ အရမ်းကြီးတော့ စိတ်မဝင်စားခဲ့ ။ ဘယ်လိုဘဲ ဝူဟန်မြို့မှာ ဖြစ်နေပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်က လူတွေက သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလို နေလျက်ပါဘဲ ။ ဒါပေမယ့် တချို့သော ပြည်နယ် မြို့ တွေမှာရထားတွေအပေါ် ဘတ်စ်ကားတွေ အပေါ် တရုတ် လူမျိုးတွေနဲ့ တရုတ်နဲ့ တူသူ အာရှသားတွေ အပေါ်ကို စော်ကား ရှုံ့ချတာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ လည်း သတင်းတွေ ထွက်လာပါတယ် ..။ တက်နေဝန်းတို့ နေတဲ့ ဒေသမှာတော့ ဒါတွေလည်း မဖြစ် မကြုံရဘူး ။ မတွေ့ရဘူး ။ တက်နေဝန်းရဲ့ ဇနီးချောလေး ဇွန်ပန်းခိုင် က မြန်မာပြည်ကို ဒါတွေ မဖြစ်ခင်ထဲက ထွက်သွားခဲ့လို့ တက်နေဝန်း အိမ်မှာ တယောက်ထဲ ။ ဇွန်ပန်းခိုင်ရဲ့ မိဘတွေက အသက်ကြီးကြပြီ ။ ကျန်းမာရေးက သိပ် မကောင်းကြဘူး ။ အခု မိခင်ဖြစ်သူက ဆေးရုံတက်ရတယ် ။ ဇွန်ပန်းခိုင်လည်း မြန်မာပြည်ကို မပြန်တာ ကြာပြီ ။ မိဘတွေကို လို အပ်တဲ့ ဆေးဝါးတို့ ငွေတို့ဘဲ လှမ်းပို့ပေးနေခဲ့တယ် ။
( ကိုကိုရေ..မေမေ့ဆီကို ဇွန် သွားလိုက်တော့မယ်…..ရုံးက ခွင့်ယူခဲ့ပြီးပြီ…) လို့ ဇွန်ပန်းခိုင်က ပြောပြီး တက်နေဝန်းကို လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ခိုင်း တယ်။ တက်နေဝန်းလည်း အွန်လိုင်းမှာ ရှာဖွေပြီး ဝယ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဇွန်ပန်းခိုင် က မသွားခင် တက်နေဝန်းကို ရန်ကုန်က သူ့ညီမလေး ငုဝါခိုင် က မနီးမဝေးက မြို့ကြီးမှာ သင်တန်း လာတက်ရမှာ..သူကတော့ ရန်ကုန်က အမေ့ဆီကို ပြေးရပြီ …ငုဝါခိုင် ရောက်လာခဲ့ရင် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံလိုက်ပါ..အနီးအနားကို လိုက်ပြပို့ပေးလိုက်ပါ လို့ မှာသွားတယ် ။ ဇွန်ပန်းခိုင် သွားတုံးက အေးအေးဆေးဆေးဘဲ ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် လုံးဝကို မရှိသေးဘူး ။ သူသွားပြီး တပတ်လောက်မှာ ဇွန်ပန်းခိုင်ရဲ့ ညီမလေး ငုဝါခိုင် တက်နေဝန်းဆီကို ဖုန်းဆက်လာတယ် ။ ( အကိုတက်ရေ..ငုဝါ ရောက်နေပြီ . .သင်တန်းတွေ တက်နေတယ်…သင်တန်းပြီးရင် အကိုတက်တို့ဆီကို လာခဲ့မယ်….မမဇွန်တော့ ရန်ကုန် ရောက် နေပြီ…မေမေက ဆေးရုံက ဆင်းပြီ…သက်သာတယ် တဲ့…….ငုဝါလည်း အကိုတို့ဖက် ခဏ လာပြီးတာနဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြန်မယ်လေ ..) တဲ့ ။ တက်နေဝန်းလည်း ( လာခဲ့ ငုဝါ အကို လာခေါ်ပေးမယ်…ဒီအနီးအနား မြို့တွေ အကို လိုက်ပို့ပေးမယ် . သင်တန်းတွေ ပြီးရင် ဖုန်းဆက်လိုက်နော်…..) လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ ရန်ကုန်ကနေလည်း ဇွန်ပန်းခိုင်က ( ခွင့်ယူလိုက်နော်…ကိုကို . .ညီမလေး ကို ဂရုစိုက်လိုက်နော်…ကိုကို…) လို့ တက်နေဝန်းကို ဖုန်းဆက်တယ် ။
အလုပ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ခွင့်ကြို ယူလိုက်တယ် ။ ငုဝါခိုင် သင်တန်းတွေ ပြီးသွားပြီးတဲ့နောက် တက်နေဝန်းဆီကို ဖုန်းဆက်တော့ တက်နေဝန်း ငုဝါခိုင် ရောက်နေတဲ့ မြို့ကို ကားနဲ့ မောင်းသွားပြီး ခေါ်ပေးလိုက်တယ် ။ ငုဝါခိုင်နဲ့ မတွေ့တာ နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပြီ ။ တက်နေဝန်းလည်း စိုပြေဝင်းပ လှပနေတဲ့ ခယ်မလေးကို ကြည့်ပြီး အံ့သြနေသည် ။ သူတို့ မြန်မာပြည်က မ ထွက်လာခင်က ငုဝါခိုင်သည် ကလေးသာသာ ဆယ်ကျော်သက်လေးဘဲလေ ။ အပြန်ခရီးမှာ တလမ်းလုံး ငုဝါခိုင်ရဲ့ စကားသံလေးတွေကို နားထောင်ခဲ့ရတယ် ။ ငုဝါခိုင်က တက်နေဝန်းတို့ နေတဲ့ ရပ်ဝန်းဒေသကို စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ သစ်ပင်တွေ သစ်တောတွေနဲ့မို့ သာယာလိုက်တာ လို့ ချီးမွမ်းလာတယ် ။ လမ်းဘေးမှာ ဒရယ်လေးတွေ ယုန်ကလေးတွေကိုလည်း တွေ့ရလို့ အရမ်း သဘောကျတယ် ။ စကား တပြောပြောနဲ့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာကြတယ် ။
( ဒါ အကိုတို့ အိမ်လေးဘဲ ငုဝါ . . .) ( ဟင် . . .) သူတို့ အိမ်ကလေးကို ငုဝါခိုင် တွေ့တော့ …( ဟယ်…ကိုတက်တို့ မဇွန်တို့ အိမ်လေးက လှလိုက်တာ….သိပ် သာယာတာဘဲ…ခြံလည်း ကျယ်တယ် လို့ ပြောတယ် ။ အိမ်ရှေ့က ချယ်ရီပင်တွေက ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်နေတာကို ငုဝါခိုင် သိပ် သဘောကျတယ် ။ ဆယ်လ်ဖီတွေ ဆွဲတော့တာဘဲ ။ အိမ်ပြန်ရောက်ကြပြီးတဲ့နောက် အချိန်ကို ကြည့်ပြီး ငုဝါခိုင် နဲ့ တက်နေဝန်းတို့ ရန်ကုန်က ဇွန်ပန်းခိုင် ဆီကို ဖုန်းခေါ်ကြတယ် ..။ ဇွန်ပန်းခိုင်က ( ရောက်တုံးရောက်ခိုက် လျောက်လည်နော် ညီမလေး…..အကိုတက်ကို အားမနာနဲ့ . .သူ့ကို စားချင်တာ လိုက်ကျွေးခိုင်း..လိုချင်တာ ဝယ်ခိုင်း….) လို့ သူ့ညီမ ငုဝါခိုင်ကို မှာတယ် ။ ချစ်ဇနီးလေး ဇွန်ပန်းခိုင်က မသွားခင် ထဲကလည်း သေသေချာချာ မှာထားခဲ့တယ် ။ ညီမလေးကို လိုက်ပြ လိုက်ကျွေးပါ လို့ ။ အခုလည်း ရန်ကုန်ကနေ ဖုန်းနဲ့ ထပ်ပြောပြန်တယ် ။
တက်နေဝန်း ဇနီးသည် မှာတဲ့အတိုင်း ငုဝါခိုင်ကို သူစားချင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဆိုင်တွေမှာ လိုက်ကွေးတယ် ။ အင်း….ညီမလေး ငုဝါခိုင်က စားရုံတင် မဟုတ်ဘူး..သောက်လည်း သောက်တယ်……ဇွန်ပန်းခိုင်က သူ ၀ိုင် နဲ့ ကော့တေးလ်တွေ အသောက်များတိုင်း ( ဇွန်တို့အမျိုးတွေက အရက်ကြိုက်တယ်…သောက်တယ်….ဘမျိုးဘိုးတူ ဆိုတာမျိုးပေါ့…..) လို့ ပြောလေ့ ရှိသလိုဘဲ ညီမလေး ငုဝါ လည်း အရက်ကို ကြိုက်ပုံရတယ်… သောက်ရင် ထပ်မှာခိုင်းပြီး အသောက်များသွားတဲ့အတွက် တက်နေဝန်း တယောက် မျက်လုံးပြူးသွားရတယ် ။ အင်းလေ..သူက သုံးလေးရက် လောက်ဘဲ နေမှာဘဲ…နေတဲ့ရက်တွေမှာ ပျော်ပါစေ …ငါ့တာဝန် အတိုင်း သူ့ကို လိုက်ကျွေးလိုက်ပို့မယ်….လို့ တက်နေ ဝန်း စဉ်းစားလိုက်တယ် ။
ဒါပေမယ့် အိမ်လေးထဲမှာ သူနဲ့ကိုယ် နှစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ခယ်မလေးရဲ့ အတိုအပြတ် အဟိုက်တွေ ဝတ်တဲ့ အကျင့်တွေကြောင့် တက်နေဝန်း တယောက် ရင်မောနေရတယ် ။ ပိုပြီး မျက်လုံးတွေ ပြူးရတာက အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး အိမ်နေရင်း အဝတ်တွေ လဲပြီးတဲ့အချိန် ငုဝါခိုင်က ဘလောက်စ်လေးကို အတွင်းမှာ ရင်စည်း မပါဘဲ ဝတ်ပြီး ရောက်လာတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ။ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ရင်သားတွေက မသေးဘူး ။ လုံးထွားပြီး သိသိ သာသာကြီးတွေ ။ လမ်းလျောက်တဲ့အခါ ဒီ ရင်သားကြီးတွေက တငြိမ့်ငြိမ့် တသိမ့်သိမ့် တုန်နေကြတယ် ။ ခက်ပြီ ။ တက်နေဝန်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှား နေတယ် ။ ခယ်မလေးကတော့ သီချင်းဖွင့်ပြီး တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ကနေတယ် ။ ကိုယ်က လှုပ်တော့ ရင်စိုင်တွေကပါ လှုပ်တော့တာပေါ့ ။ နောက်တနေ့မှာလည်း ရာသီဥတု ပူတယ် ဆိုပြီး ဘောင်းဘီတိုလေး ဝတ်တာ ဝတ်တဲ့ ဘောင်းဘီက ဂျင်းဘောင်းဘီလို ကြပ်ကြပ် မဟုတ်ဘဲ ပေါင်ရင်းနေရာတွေမှာ ပွပွကြီးမို့ ဆိုဖါမှာ ထိုင်ချလိုက်တဲ့ အခါတွေမှာ ပေါင်ဂွဆုံနေရာကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရတတ်တော့ တက်နေဝန်း တယောက် စိတ်တွေ နိုးကြားဖေါက်ပြန်လာရတယ် ။
အမွှေး ပြောင်စင်အောင် ရိပ်သင်ထားတဲ့ ခယ်မလေး ငုဝါခိုင်ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ တခြမ်းကို လျပ်တပျက် တွေ့လိုက်ရလို့ ။ ခက်တော့ ခက်နေပြီ ။ အနေမတတ်တော့ ဖြဲပြနေသလို ဖြစ်နေပြီ ။ အထိန်းမတတ် ဇိန်းဇတ်ဇတ်မို့ တက်နေဝန်းတယောက် ဒိန်းတပ်တပ်နဲ့ ရင်ထဲ နေလို့ မကောင်း ။ နောက် တရက်မှာ လိုက်ပြတာက မြို့ကြီး ထဲက ပြတိုက်တွေ ကျောက်တိုင်တွေ နဲ့ ပန်းခြံတွေ ။ မြစ်ကမ်း နဘေး က ဆိုင်မှာ ညနေစာ ကျွေးတယ် ။ တိုက်အမြင့် တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ မြစ်ကမ်း ရှုခင်းကို မြင်နေရတဲ့ ဘားနဲ့ စားသောက် ဆိုင်ပေါ့ ။ ငုဝါခိုင် တယောက် ကော့က်တေးလ် ကောင်းကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ပြီလေ ။ အပေါ်ကနေ ကြည့်ရတာ အရမ်း သာယာတာဘဲနော် . . . အဖြူရောင် မော်တော်ဘုတ်လေးတွေကလည်း အများကြီး တန်းစီနေကြတယ် . ထပ် ထပ် မှာရင်း ယူရင်းနဲ့ တော်တော် မူးသွားတယ် ။ အပြန်မှာ ကျောက်တိုင်ပန်းခြံ ဘေးက လမ်းကလေးမှာ လမ်းလျောက်ကြတော့ ငုဝါခိုင် တယောက် တက်နေဝန်းကို ပုခုံးမှီလိုက် လက်မောင်းကို တွဲဖက် လိုက်နဲ့ တော်တော်လေး ရေချိန်ကိုက်နေတယ် ။
သူနဲ့ကိုယ် နှစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်သလို သူကလည်း ရုပ်ကလေးက ချောချော ကိုယ်လုံးအဆက်အပေါက်ကလည်း တကယ့်ကို တောင့်တင်း လှပ အချိုးကကျ ဆိုတော့ တက်နေဝန်း ဒါတွေကို အနီးကပ် မြင်နေရတော့ စိတ်ရိုင်းတွေက ထကြွရတယ် ။ သွေးတွေ ဆူဝေလာတယ် ။ စိတ်ထိန်း…စိတ်ထိန်း ….တက်နေဝန်း မင်း စိတ်တွေကို ထိန်း . . . မဖြစ်သင့်ဘူး . . .ဆင်ခြင် . .ဆင်ခြင် …..အိမ် အဝင်မှာ ငုဝါခိုင်က အမူးလွန်နေတဲ့အတွက် သူ့ကို ဖက်ထားပြီး ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့ ဝင်တဲ့အတွက် သူ အမြင်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ အလှအပကြီး နှစ်လုံးက သူ့ ရင်ဘတ်ကို ထိလိုက် ဖိလိုက်နဲ့ အစစ်အမှန် အထိအတွေ့တွေကို ပေးခဲ့တယ် ။ စကပ်ကလည်း တိုတိုကားကားလေးမို့ ပေါင်တန် ဖြူဖြူ လှလှတွေကလည်း မမြင်ချင် အဆုံး ။ ( ကဲ..တက်အိပ်တော့ ငုဝါ ….) လှေခါး အတိုင် တက်သွားတဲ့ ငုဝါခိုင်ရဲ့ စကပ်တိုတိုကားကားလေးကြောင့် မမြင်အပ်တဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီးတွေရော ပင်တီ အနက်လေးကိုရော မြင် လိုက်ရတယ် ။ မျက်စိလွှဲပြီး အောက်ထပ် ဧည့်ခန်းမှာဘဲ တီဗီ ကြည့်နေလိုက်သည် ။
ခုန မြင်လိုက်ရတာတွေက မျက်စိထဲက ထွက်ကို မထွက်ဘူး ။ တီဗီမှာ တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့ကြီး ခြောက်ကပ်နေတာတွေ လူတွေ ဆေးရုံမှာ အတုံးအရုံး သေကြတာတွေ ပြနေတယ် ။ နောက်ထပ် ထိတာက အီရန်နိုင်ငံ ။ အမေရိကန်မှာတော့ ကူးစက်သူတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ များလာပြီ တဲ့ ။ ပို့တ်လန် နဲ့ ၀ါရှင်တန် ပြည်နယ် ဖက်မှာ စတွေ့နေရပြီ ။ တဖြည်းဖြည်း များလာပြီ ။ ခယ်မချောလေးနဲ့ ဝေးဝေးနေမယ် လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း သူ ရှိနေတဲ့ အပေါ်ထပ်ကိုတောင် မတက်တော့ဘဲ အောက်ထပ် ဧည့်ခန်းက ဆိုဖါရှည်ပေါ်မှာဘဲ အိပ်လိုက်တယ် ။ အိပ်မက်တွေက ဆောင်းတွင်းလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဂယောက်ဂယက် နဲ့ ။ အိပ်မက်ထဲမှာ သူနဲ့ ခယ်မလေး ငုဝါခိုင်တို့ ဆိုဖါပေါ်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးတွေနဲ့ ထပ်ရက်ကြီး ဖြစ်နေတာကို မိန်းမ ဇွန်ပန်းခိုင် တွေ့သွားလို့ အရစ်တွေ စွတ်စက် တက်တယ်လို့ မက်တယ် ။ ချွေးတွေပြန် ငြင်းဆန် အော်ဟစ်ရလို့ လန့်နိုးလာတယ် ။ အဝတ်မဲ့ ဖင်တုံး ဖြူဖြူကြီးတွေက စွဲမက်စရာဘဲ ။ အိပ်မက်ကို မြင်ယောင်နေမိတယ် ။ အောက်က ငတိကလည်း မာကြောပြီး ထောင်နေတယ် ။ မနက် လေးနာရီဘဲ ရှိသေးတယ် ။ ရေအေးအေး တပုလင်း ယူသောက်လိုက်ပြီး ပြန်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ အိပ်လို့ မရတော့ဘူး ။ ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ် ။ ပြန်နိုးတော့ မနက် ရှစ်နာရီ ခွဲနေပြီ ။
သွားတိုက် မျက်နှာသစ်ဖို့ အပေါ်ထပ်က ရေချိုးခန်းဆီကို တက်ခဲ့လိုက်တယ် ။ တက်နေဝန်းရဲ့ အိမ် အောက်ထပ်မှာက အိမ်သာ ရှိပေမယ့် ရေချိုးခန်း မရှိဘူး ။ လက်ဆေးဖို့ ကြွေခွက် ပါပေမယ့် တက်နေဝန်းက ဒီ အိမ်သာအခန်းလေးကို ဧည့်သည် အတွက်ဘဲ ထားပြီး မျက်နှာသစ် သွားတိုက်တာကို အပေါ်ထပ်က ရေချိုးခန်းမှာဘဲ လုပ်တယ် ။ အပေါ်ထပ် ရေချိုးခန်းလေးထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားရတယ် ။ အဝင်ဝ ကြမ်းပြင်မှာ ပင်တီလေး တထည် ။ ဝတ်ပြီးသား ပင်တီလေး ပါ ။ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ပင်တီ ဆိုတာ သေချာတာပေါ့ ။ တက်နေဝန်း ကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါ အလိုလို နှာခေါင်းနားကို တေ့ပြီး ရှူလိုက်မိတယ် ။ ချက်ချင်းဘဲ ငါ ဘာလုပ်လိုက်ပါလိမ့် လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားသွားပြီ လို့ ထင်လိုက်မိပြီး ကဗျာကရာ ပင်တီနက်လေးကို ဘေးက စင်ပေါ်ကို သူ ပစ်တင်လိုက်တယ် ။ ပင်တီလေးက ရလိုက်တဲ့ ညှီစို့စို့ အနံ့လေး က သူ့စိတ်တွေကို ထောင်းကနဲ ကြွသွားစေတယ် ။ စောက်ပတ်နံ့……တနေကုန် ဝတ်ထားတဲ့ ပင်တီ ဂွဆုံနေရာက စောက်ပတ် အနံ့ ။ သူ့ပေါင်ကြားက လီးက ချက်ချင်း ထောင်လာတယ် ။ မနက် အိပ်ရာက ထထချင်းဆိုရင် လီးကလည်း အမြဲ တောင်တယ်လေ ။ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ပြီး မျက်နှာသစ် တဘက် နဲ့ သုတ်ရင်း သူနဲ့ ဇွန်ပန်းခိုင်တို့ အိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းဆီကို အသွား ငုဝါခိုင်ကို ပေးနေထားတဲ့ အိပ်ခန်း ကို အဖြတ်မှာ တံခါးကို ဖွင့်ဟထားတာကြောင့် သူ အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါ သူ့စိတ်တွေ ဘလောင်ဆူသွားတယ် ။
ခယ်မလေး ငုဝါခိုင်ဟာ ထမီတခြား လူတခြား ဖြစ်နေပြီး ကွေးကွေးလေး အိပ်နေတာမို့ ဖင်တုံးဖြူဖြူကြီး နှစ်လုံးနဲ့ ဒီကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ် ကြီးကို သူတွေ့လိုက်ရလို့ပါ ။ ငုဝါခိုင် အိပ်ရာထရင် စားဖို့ တက်နေဝန်း ဘရိတ်ဖတ်စ် လုပ်လိုက်တယ် ။ ကြက်ဥမွှေကြော်…..ဘေကင် နဲ့ အာလူးပြားကြော် လုပ်လိုက်တယ် ။ ပေါင်မုန့် တွေ မီးကင်လိုက်တယ် ။ ကော်ဖီက တအိုး တည်လိုက်တယ် ။ ခဏအကြာ လှေခါးက ဆင်းလာတဲ့ ခြေသံ ကြားရတယ် ။ ( အကိုတက်……အနံ့ မွှေးလိုက်တာ….ဘာတွေများ လုပ်နေတာလဲ….) ငုဝါခိုင် ထမင်းစားခန်းထဲ ဝင်လာတယ် ။ လုပ်ပြန်ပြီ ။ တီရှပ် ပါးပါးလေးကို အတွင်းခံ မပါဘဲ ဝတ်ထားလို့ ငုဝါခိုင်ရဲ့ နို့ကြီး နှစ်လုံးက တင်းမို့လုံးင်္ကြနေကြပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေက တီရှပ် အသားမှာ ထင်းနေကြတယ် ။ လှုပ်တုတ်တုတ်နဲ့ ။ ဒီနေ့တော့ မိုင် နှစ်ရာ လောက် ဝေးတဲ့ မြိုကလေး တမြို့ကို ငုဝါခိုင်ကို တက်နေဝန်း ခေါ်သွားလိုက်တယ် ။ အချောစား ခယ်မလေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ အတူတူ သွားရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ ။ သူမူးချင်တာ မူးတတ်တာကို သိထားပြီမို့ သူ့ကို သောက်ပါ သောက်မလားလို့ တက်နေဝန်း မဖိတ်ခေါ်တော့ ဘူး ။ ဒီအခါမှာ ငုဝါခိုင်က သူ့ဖါသာ အရက် မှာသောက်တယ် ။
ဒီမြို့လေးက ရှေးဟောင်း မြို့ကလေး ။ ဒေသခံ လူနီရိုင်းတွေဆီက အတင်းကြီး လုယူခဲ့တုံးက ခံတပ်တွေ အမြောက်တွေ နဲ့ ဒီမြေကို အရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ အချိန် သုံးတဲ့ သင်္ဘော ပုံစံတူ ကို ပြထားတယ် ။ ငုဝါခိုင်ကို လိုက်ပြ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေးတယ် ။ ဒါမှ ဇနီးချောလေး ဇွန်ပန်းခိုင်က သဘောကျမှာလေ ။ သင်္ဘော ရဲ့ ဝမ်းဘိုက်ထဲကို ဆင်းကြည့်ကြတော့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ နေရာလေးကြောင့် ငုဝါခိုင် ချော်လဲတာ တက်နေဝန်းက သူ့ကိုယ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖက်ထိန်း ပေးလိုက်ရတယ် ။ ထွားအိတဲ့ ရင်စိုင်ကြီးတွေနဲ့ သူ့ရင်ဘတ် မိတ်ဆက်မိကြရပြန်ပြီ ။ သင်္ဘောပေါ်က ဆင်းခဲ့ ပြီးတဲ့နောက် ငုဝါခိုင် သေးအရမ်း ပေါက်ချင်လို့ အများသုံး အိမ်သာကို ပြေးရတယ် ။ အိမ်သာထဲက အထွက် သူက ( သေးထွက် သားတယ် အကိုတက်ရယ်…..ပင်တီ စိုသွားတယ်…..) လို့ ပြောပြီး စိုနေတဲ့ ပင်တီလေးကို အမှိုက်ပုံးထဲကို ပစ်လိုက်တာကို တက်နေဝန်း တွေ့လိုက်ရ တယ် ။ ဒီနေ့နဲ့ နောက်နေ့တောင် မတူတော့ဘူး ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ် ကလည်း စပြီး ပျံ့နှံ့နေပြီ ။ သေတဲ့လူတွေ များသထက် များလာတယ် ။ အီတလီကတော့ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး ။ သေတာ သောက်သောက်လဲ ။ လက်ဆေးကြပါ ဆိုတာ အထပ်ထပ် ကြေငြာနေတယ် ။
တက်နေဝန်းနဲ့ ငုဝါခိုင်တို့လည်း အပြင်က အစားတွေ မစားတော့ဘဲ ကိုယ့်ဖါသာဘဲ ချက်စားကြဖို့ တိုင်ပင်လိုက်ကြပြီး နှစ်ပတ်စာလောက် ဈေး ဝယ်ဖို့ ဈေးကို သွားကြတယ် ။အေသားငါး နဲ့ ဆီပုံးတွေ ကြက်သွန် ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်ဥ အကုန် ဝယ်လာတယ် ။ ငုဝါခိုင်ကတော့ အရက်ပုလင်း ၀ိုင်ပုလင်းတွေ ဒါဇင်လိုက် ဆွဲလာတယ်။ အင်း…ရင်လေးစရာဘဲ ။ သူ သောက်တော့မယ်လေ ။မြို့တွေမှာ ကူးစက်နှုံးက အရမ်း မြန်တယ် ။ ဗြုံးဆို ကူးစက်သူတွေ တပုံကြီး ဖြစ် ဆေးရုံတွေ မနိုင် ဖြစ်ကုန်တယ် ။ (စတေးဟုမ်း) အိမ်မှာဘဲ နေကြဖို့ ပြောနေကြတယ် ။ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းကုန်တယ် ။ ဒီအတိုင်း ဆိုရင် မြန်မာပြည် ရောက်နေတဲ့ မိန်းမလည်း ဒီ ပြန်လာဖို့ မသင့်တော်..ဒီက ခယ်မလေးလည်း မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ မလွယ် ဖြစ်နေပြီ ။ အပျော်စီး သင်္ဘောတွေက ခရီးသည်တွေလည်း အကုန်နီးပါး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ကုန်တယ် ။ လေယာဉ်စီးဖို့လည်း ကြေက်စရာ ဖြစ်လာတယ် ။ လော့ဒေါင်း တွေ လုပ်ကုန်တယ် ။ သေနှုံးတွေ ပိုပို မြင့်တက်လာတယ် ။ ဆေးရုံတွေမှာ လူနာတွေ ပြည့်ကြပ်နေတယ် ။
တက်နေဝန်းတို့ နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူနာတင်ကားတွေ အတချိန်လုံး ရောက်လာနေတယ် ။ ကပ်ဆိုးကြီး နဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပြီ ။ ဇွန်ပန်းခိုင်က ဖုန်းဆက်တယ် ။ သူလည်း ပြန်မလာနိုင်သေးသလို ငုဝါလည်း အဲဒီမှာဘဲ နေနေပါ ..တဲ့ ။ တက်နေဝန်းတော့ ငုဝါခိုင်နဲ့ အိမ်ထဲ အောင်းနေရပြီ ။ အိမ်ကလေးထဲ နှစ်ယောက်ထဲ ။ ဟိုတယောက်ကလည်း ဖေါ်ချင် ပြချင် ။ မလုံ့တလုံနဲ့ ။ ဒီတယောက်ကလည်း နဂိုထဲက ခပ်ထန်ထန် ။ မိန်းမ မရှိလို့လည်း ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတယ် ။ နီးနီးကပ်ကပ် ။ ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်း ညိတော့မယ် ။ ငုဝါခိုင်လည်း တက်နေဝန်းနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးလာတော့ အပြောအဆိုတွေ ပိုပြီး ပွင့်လင်းလာသလိုဘဲ ..။ အနေအထိုင်ကလည်း အရင်ထက် ပိုပြီး ရဲတင်း လာတယ် ။ တရက်မှာ တက်နေဝန်း အိပ်ရာက မထခင် ငုဝါခိုင် မီးဖိုထဲ ဆင်းပြီး ကြော်လှော်နေတယ် ။ တက်နေဝန်း ဆင်းသွားတော့ တုန်လှုပ် ခြောက် ခြားသွားတယ် ။ ငုဝါခိုင်က ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ ချည်သား တီရှပ် အဖြူ ပွပွကြီးကို တထပ်ထဲ ဝတ်ထားသလို အောက်ပိုင်းမှာက ပင်တီ အနွမ်းလေးနဲ့ ။ မလုံ့တလုံနဲ့ ဟင်းချက်နေတဲ့ ငုဝါခိုင် က ( အကိုတက်…..ကြိုက်လား…..) လို့ မေးလိုက်တာက ချက်နေတဲ့ ထမင်းကြော်ကို ပြောတာလား သူ့ ပင်တီလေး နဲ့ ပုံကို ပြောတာလား မသဲကွဲပါဘူး ။
အိုး ….အွန်လိုင်း လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ တွေ့ရတဲ့ နံမည်ကျော် မြန်မာမော်ဒယ် မင်းသမီးကိုများ အားကျလို့ လုပ်လေသလား …ငုဝါခိုင်ရယ် ။ တခါတခါ တက်နေဝန်း စိတ်တွေက ထိန်းချုပ်လို့ မရချင်တော့ ။ ရောဂါ ပျံ့နှံ့မှုတွေကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အချိန် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးကလည်း စားရမှာလည်း အခက် ။ မစားဘဲ နေရတာလည်း တော် တော် ခက်တယ် ။ သူ့ဖက်ကတင် ဒီလို စိတ်တွေ ဖြစ်နေသလား ။ ငုဝါခိုင်ကလည်း သူ့ကို အရင်ကထက် ကပ်သလိုဘဲ ။ ညဖက် တီဗီ ထိုင်ကြည့်ကြရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ဖက်ကို တိုးကပ်လာတတ်တယ် ။ သူ့လက် မောင်းတွေကို လက်ဖက်တယ် ။ ကိုင်တယ် ။ တခါတခါ ပုခုံးကို လာမှီတယ် ။ သိပ် နီးကပ်လွန်းတော့ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့တွေကို ရလို့ စိတ်တွေ ခြောက်ခြားတယ် ။ ကတုန်ကရင် ဖြစ်လာတယ် ။ အောက်က ငတိကလည်း ဘာတောင်သလဲ မမေးနဲ့ ။ ကြီးကောင်ကြီးမား နဲ့ အိမ်သာထဲ ဝင်ပြီး ကွင်းတိုက်ရတာ ဆယ်ကြိမ် မကတော့ ။ မနက် ဆိုရင် ထချင်တဲ့ အချိန်မှ ထကြတယ် ဆိုတော့ ညဖက် ဆိုရင်လည်း အိပ်ချင်တဲ့ အချိန်ကျမှ အိပ်ကြတယ် ။
ဒီနေ့ညတော့ ညနေစောင်းထဲက မိုးတွေက အကြီးအကျယ် ရွာတယ် ။ လေမုန်တိုင်း ဝင်တယ် လို့ သတင်းမှာ ပြောတာ ကြားလိုက်သလိုဘဲ ။ ငုဝါခိုင်က စောင်လေး ခြုံပြီး တက်နေဝန်းရဲ့ ဘေးမှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်တယ် ။ စီအင်အင် ကြည့်လွန်းလို့ စိတ်တွေ ညစ်လာကြတယ် ။ ရောဂါ ကူးစက် တာတွေ သေတာတွေ ဆေး မရှိတာတွေ ကိုဘဲ တွေ့နေ ကြားနေရတယ် ။ ဒါကြောင့် အကိုတက်ရယ်….ပျော်စရာလေး ကြည့်ကြရအောင် လို့ ငုဝါ ခိုင်က ပြောလာတယ် ။ တက်နေဝန်း အနားကိုလည်း တအား ကပ်ထိုင်လာတယ် ။ ခက်ပြီ ။ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ နို့ကြီးတွေက အိကနဲ လာထိတယ် ။ စောင်ကို တက်နေဝန်းကိုပါ ခြုံခိုင်းလိုက်တယ် ။ တက်နေဝန်းက စီးရီးအဟောင်းကို ပြန်ကြည့်တယ် ။ ငုဝါခိုင် အော်ရယ်တယ် ။ ပြီးတော့ တက်နေဝန်းကို တအား ဖက်တယ် ။ စောင်ခြုံထဲမှာ သူ့လက်တဖက်က တက်နေဝ န်းရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို လာကိုင်တယ် ။ အိုး…..သီးခံနိုင်တဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာကို ကျော်သွားပြီ ။ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ပေါင်ကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်နဲ့ တောင်နေတဲ့ သူ့ထိပ်ဖူးကြီးက လက်သုံးလုံးတောင် မဝေးဘူး ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ။ တက်နေဝန်း ထိုင်ရာက ထလိုက်ပြီး အပေါ်ထပ်ကို တက်ခဲ့လိုက်တယ် ။ ရေချိုးပစ်လိုက်ရင် ဒီစိတ်ရိုင်းတွေ ကျသွားမယ် လို့ ထင်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အဝ တ်တွေကို အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ရေပန်းကို ဖွင့်လိုက်တယ် ။ ရေပန်းအောက်ကို ဝင်သွားမယ့်အချိန် ဟိုတနေ့က စင်လေးပေါ်ကို ပစ်တင်ခဲ့မိတဲ့ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ပင်တီလေးကို မြင်လိုက်တယ် ။
လက်က အလိုလို ကောက်မိသွားပြန်တယ် ။ နှာခေါင်းကို တေ့ပြီးလည်း ရှူလိုက်မိတယ် ။ အိုး…ညှီစို့စို့ အနံ့လေးက ထောင်းကနဲ ။ အောက်က ငတိက မာတာမှ သံချောင်း ဘဲ ။ မတ်နေတာကလည်း ဒုံးပျံကြီးတစင်းလို ။ ပင်တီလေးကို ရှူတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ရေပန်းအောက်ကို ဝင်လိုက်တယ် ။ မျက်စိစုံပိတ်ပြီး ခေါင်းကိုမော့ထားရင်း ရေချိုးနေတဲ့အချိန် အနောက်က အသံလိုလို ကြားလိုက်မိလို့ စောင်းငဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အနောက်ကို လာရပ်လိုက်တဲ့ ငုဝါခိုင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ဟင် . . . ငုဝါခိုင်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ် ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ရှိမနေဘူး ။ ကိုယ်တုံးလုံး နစ်ကက်ကြီး ။ ( အကိုတက် …ငုဝါရဲ့ ပင်တီကို ရှူနေတာ တွေ့လိုက်တယ် . . .ဘာလို့ ပင်တီကို ရှူမလဲ…..လူကို ရှုနိုင်တာဘဲကို………) ငုဝါခိုင်က တက်နေဝန်းကို အနောက်ကနေ သိုင်းဖက်လိုက်တယ် ။ ထွားအိတဲ့ နို့ကြီးတွေက တက်နေဝန်းရဲ့ ကျောပြင်ကို အိကနဲ ဖိကပ်လာတယ် ။ ငုဝါခိုင်က သူ့လည်ဂုတ်ကို နမ်းနေတုံး လက်တဖက်က အနောက်ကနေ အရှေ့ပေါင်ကြားကို ရောက်လာလို့ တက်နေဝန်း တွန့်ကနဲ တုန်သွားတယ် ။
မာကြောတင်းထွား မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ လုံးပတ်တုတ်တုတ်နဲ့ လီးကြီးကို ငုဝါခိုင်က ဖွဖွလေး ပွတ်သပ် ကိုင်ဆုပ်လိုက်ပါပြီ ။ ( မသင့်တော်ဘူး ထင်တယ်..ငုဝါ……..) ( ဒီမှာ အကိုတက်နဲ့ ငုဝါ နှစ်ယောက်ထဲဘဲ ရှိတာ…ဘယ်သူ သိတာ လိုက်လို့…….) လီးကို ပွတ်သပ်နေတယ် ။ ထိပ်ဖူး ဒစ်ကားကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက် နယ်လိုက် နဲ့ ။ ( ငုဝါကို ရှူချင်လား…..လာလေ….ပင်တီကိုကျတော့ ရှူနေပြီး . . . .) ငုဝါခိုင်က ရေချိုးခန်း နံရံကို မျွှကာ ပေါင်ကား ရပ်လိုက်ပြီး တက်နေဝန်းကို လက်တွေကနေ ဆွဲချပြီး ပေါင်ကြားမှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ တက်နေဝန်းလည်း ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ပေါင်တန်တွေ ကြားထဲ ခေါင်းအပ်လိုက်ရင်း မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စပြီး နမ်းလိုက်တယ် ။ ( အင်…ဟင့်……….) အကွဲကြောင်းကြီးကို သူ နမ်းရှိုက်လိုက်တယ် ။ နှာခေါင်းထိပ်နဲ့ ထိုးတယ် ။
( အို…ကိုတက်ရယ်……ဟင်း……ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ ငုဝါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူး…..ဒါ ထိပ်တန်း လှို့ဝှက်ချက် . . .)ုဝါခိုင်က ခါးလေးကို ကော့ပေးလိုက်တယ် ။ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပိုမို့မောက်လာတယ် ။ တက်နေဝန်း နမ်းရှုံ့ရုံမက လျာကို ထုတ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကို ယက်လိုက်တယ် ။ ( အိုး…….အို…….အာ………အင်း . .) ငုဝါခိုင်ရဲ့ မျက်နှာလေး မော့ ပါးစပ်လေး ဟပြီး ညည်းလိုက်တဲ့ အသံလေးပါ ။ နူးညံ့တဲ့ နီညိုညို နှုတ်ခမ်းသား ထူတွေကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ယက်လိုက်မိတယ် ။ လက်တွေကလည်း ဖင်တုံးအိအိကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်မိတယ် ။ ( အား……အား…….အား………ရှီး……အာ့….အိုး….အိုး . . . .အူး . . . .) ငုဝါခိုင်ရဲ့ လက်တွေက တက်နေဝန်းရဲ့ ဆံပင်တွေကို တအား ဆွဲထားကြတယ် ။ ဖင်တုံးကြီးတွေကို ကိုင်ဆုပ်ထားတဲ့ သူ့လက်တွေက စောက်ဖုတ်ကို သဲသဲမဲမဲ ယက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အပေါ်ကို ဆန့်တန်းပြီး ဖွံ့ထွားတဲ့ နို့အုံကြီး နှစ်လုံးကို လှမ်းကိုင် ညှစ်ထားမိရတယ် ။ စိတ်တွေကို လွှတ်လိုက်မိပြီ ။ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်တော့ ။ သူက လျာနဲ့ ယက်နေတဲ့အချိန် ငုဝါခိုင်က ကော့ကော့ပြီး သူ့မျက်နှာနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်နေပြီ ။ ပါးစပ်ကလည်း မပီမသ အော်ညည်းနေတာ အကျယ်ကြီး ။ ( ငူဝါ လိုချင်ပြီ…ငုဝါ တအား ယားနေပြီ….အို…အထဲက ယားတာ အရမ်း….အကိုတက်…..အိပ်ရာထဲ သွားကြစို့ကွာ….) လို့ ပြောနေတဲ့ ငုဝါခိုင်ကြောင့် တက်နေဝန်း ရေချိုးခန်းထဲကနေ အိပ်ခန်းထဲကို ရွှေ့လိုက်ရတယ် ။
ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်တော့ ငုဝါခိုင်က တက်နေဝန်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တွန်းချလိုက်တယ် ။ ရေမြုပ်မွေ့ယာကြီး အပေါ်ကို သူ ပက်လက် ကျသွားတဲ့အချိန် ကျားရိုင်းမလေး တကောင်လို ငုဝါခိုင်က သူ့ကိုပေါ်ကို ခွတက်လာတယ် ။ ငုဝါခိုင်သည် အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ ကောင်မလေးဘဲ ။ သူ့တန်ဆာကို လက်နဲ့ ဆွဲယူပြီး သူ့စောက်ဖုတ်မှာ တေ့လိုက်တယ် ။ လုပ်တာကိုင်တာက ကျွမ်းနေတယ် ။ တန်ဆာပေါ်ကို ဖိထိုင်ချတာက အရမ်းကြီး မဟုတ်ဘူး ။ ထိန်းပြီး ဖြည်းဖြည်းလေး ထိုင်ချလိုက်တာ ။ လုပ်နေကျ အလုပ်တခုလို ။ ( အို . . .) ငုဝါခိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး မဟတဟနဲ့ အသံလေး ထွက်သွားတယ် ။ တင်းတင်းစီးစီး အထိအတွေ့နဲ့ တန်ဆာက ငုဝါခိုင်ရဲ့ အထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တထစ်ထစ်နဲ့ ရောက်သွားတယ် ။ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ဆုပ်လိုက်တဲ့အချိန် ငုဝါခိုင်က ဖင်ကြီးတွေ တကြွကြွနဲ့ အပေါ်က ဖိချနေပြီ ။
( အင်း…..အီး….ဟင်း………..အိုး .ကို…ကိုတက်………အိုး . .ဟင်း. . .အား….အင်း . ..) ငုဝါခိုင်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက တုန်ခါနေတယ် ။ ငုဝါခိုင် ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး ဖိချနေတယ် ။ အပေါ်ကနေ လိုးနေတယ် ။ မြင်းစီးနေတဲ့ ကောင်းဘွိုင်မလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ သူ့တန်ဆာချောင်း ဝင်ထွက်နေတဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရသာက တအားကို ငြိမ့်နေတယ် ။ ( အို…ကောင်းတယ်…..ကောင်းတယ်….ဟင်း…..ကောင်းလိုက်တာ..ကိုတက်ရယ်….အို…ကိုတက်စာက တကယ် ကြီးတယ်ကွာ……ရှီး……..ရှည်လဲ ရှည် တယ် . . . .) ငုဝါခိုင် စိတ်ကြိုက် အပေါ်ကနေပြီးတဲ့နောက် နေရာချင်း လဲလိုက်ကြပါတယ် ။ ဒီအခါ တက်နေဝန်းရဲ့ အလှည့် ။ ငုဝါခိုင်ရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီး အပြတ်ကြုံးပြီ ။ ကျစ်လစ် သန်မာတဲ့ တက်နေဝန်းရဲ့ ဆောင့်အားနဲ့ သက်လုံကောင်းတာတွေကြောင့် အချက် တရာကျော် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုး အပြီး ငုဝါခိုင် အထွဋ်အ ထိပ်ကို တက်ရောက်သွားပါတယ် ။
( အို…ကောင်းလိုက်တာ ကိုတက်ရယ် . . . ..အင်….အင်…….ဟင်း . . .တအား….တအား ကောင်း……ကောင်းသွား…….) တက်နေဝန်းလည်း ငုဝါခိုင် လမ်းဆုံး ရောက်သွားလို့ ကျေနပ်တယ် ။ သူမကောင်းသေးဘဲ မပြီးသေးဘဲ ကိုယ် မပြီးသွားချင်ဘူး ။ ငုဝါခိုင်နဲ့ တညလုံး တချီပြီး တချီ လိုးကြတယ် ။ နွားသိုးကြိုးပြတ် လို့ ပြောမလား ။ နွားငတ်ရေကျ လို့ ပြောမလား ။ လိုးလိုက်ကြတာ ဆက်တိုက် ။ ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်းရလို့ ခယ်မချောလေးကို ကောင်းကောင်း လိုးနေရတဲ့ သူ့အဖြစ်ကို တက်နေဝန်း မယုံကြည်နိုင် အောင်ပါဘဲ . . .။ စတေးဟုမ်းက ကြာဦးမယ် တဲ့ ။ ခယ်မချော လေးရဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တွေကို အားရပါးရ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ် နမ်းရှုံ့နေတဲ့ တက်နေဝန်းသည် စောစောကဘဲ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ (စတေးဟုမ်း) အစ်စ် (ဂွတ်)…လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံး ဘေးလွတ် ကျန်းမာကြပါစေ ပန်းရိုင်းရေးသည်..